मीठा आलू कासरोल Mars मार्शमेलोसँग} - व्यंजनहरु
कसरी जेलो शट चौको बनाउने
बदाम बटर oreo आइस बक्स केक
के राम्रो जोडी चिकन कोर्डन bleu संग
क्रीम चीज संग बगेल डुबकी नुस्खा
कसरी एक Portabella मशरूम काट्न
मीठो आलु क्यासरोल
यो सजिलो छ मीठो आलु क्यासरोल प्यान र मार्शमैलोको साथ माथि रहेको हाम्रो पारिवारिक धन्यवाद टेबलमा पारम्परिक पक्ष हो। यस सान्त्वनाको थालमा कोमलताले मैश गरिएको मिठो आलु, खैरो चिनी र दालचिनीको स with्केतको साथ एकजुट हुन्छ।
यो सबै पिलोई नरम मार्शमेलो र टोस्ट प्याकनको साथ मुकुट गरिएको छ मिठो र मीठो बनाउने मास्टरपिस सिर्जना गर्नको लागि जुन तपाईं प्रेममा पर्नुहुनेछ!
एक डेजर्ट जस्तो साइड डिश
मलाई टर्की डिनर मनपर्छ ... टर्की प्रति सेनको लागि होईन, अरुको लागि सामानहरू र पक्षहरू जुन यससँगै जान्छन् यस आश्चर्यजनक कासरोल जस्तै।
यो मिठाई आलु क्यासरोल एकदम सरल र परम्परागत छ मीठो आलु र पेकानको स्वादहरु को माध्यमबाट साँच्चै चम्किन।
यो लगभग डेजर्ट जस्तो साइड डिश थैंक्सगिभ Christmas, ईस्टर वा क्रिसमसको लागि उपयुक्त छ तर आइतवारको खानाको लागि पनि सेवा दिन पर्याप्त सरल छ!
स्वादिष्ट र पौष्टिक
मिठो आलु एक पौष्टिक पावरहाउस बीटा क्यारोटीन, साथै भिटामिन सी र पोटेशियमको स्रोत हो। पकाएको मीठो आलु पनि फाइबरको राम्रो स्रोत हो।
केवल तिनीहरू पौष्टिक र स्वादिष्ट छैनन् केवल राम्रो अंश यो मीठो आलु क्यासरोल महँगो छैन यसको मतलब यस सजिलो पक्षले बैंकलाई तोड्दैन!
आलु तयार गर्दै
म खाना पकाउने समयमा कटौती गर्नका लागि उम्लनु अघि मेरा मीठो आलुहरू बोक्रा छन र क्यूब गर्न मनपर्दछ। तपाईं निश्चित रूपमा उनीहरूलाई पूरै उमाल्न सक्नुहुन्छ (तिनीहरूलाई लगभग २०-२5 मिनेटहरू चाहिन्छ) र पकाएपछि तिनीहरूलाई छीलो।
प्रयोग गर्दै आलु माशर हातले मीठो आलुलाई म्यास गर्न तपाईंलाई संरचनाको अलिकता छोड्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले रेश्बी चिक्वाइ मन पर्छ भने, तपाईं निश्चित रूपमा एक ह्यान्ड मिक्सर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई फ्लफ बनाउन।
हामी सधैं मार्शमेलो र पेकनको साथ साधारण मीठा आलु क्यासरोल बनाउँछौं तर तपाईं एक थप्न सक्नुहुन्छ स्वादिष्ट टुक्रा टुक्रा , वा एक स्वादिष्ट को लागी बौरबानको छप बौर्न स्वीट आलु क्यासरोल !
ग्राउड बीफ र खट्टा क्रीमको साथ नाचो डुबकी
अगाडि बनाउन सजिलो
यो सजिलो मीठो आलु क्यासरोल समय भन्दा अगाडि राम्रोसँग तयार गर्न सकिन्छ र रातको समयमा फ्रिजरेट गरिएको खाना तयार गर्न एक ब्रीज बनाउन।
यदि तपाइँ बेकिंग अघि फ्रिज फ्रिज गर्नुहुन्छ भने, म यसलाई बेच्न कम्तिमा minutes० मिनेट पहिले फ्रिजबाट हटाउने सल्लाह दिन्छु।
के तपाईं कुखुराको ब्रोथको लागि गोमांस ब्रोथ प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ?
म यसलाई २० मिनेट जति तातो राख्छु र त्यसपछि टपिंग थपेर थप १-20-२० मिनेट पकाउँदछ किनकि चिसो मिठाईको आलु तताउन धेरै समय लाग्छ।
यस विधिले एकदम ठूलो क्यासरोल बनाउँदछ त्यसैले यदि तपाईं आफ्नो परिवारको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले आधा भागमा नुस्खा काट्न सक्नुहुन्छ। वा अझ राम्रो, पकाउने तरीकालाई नै बनाउनुहोस् र अर्को दिनको बाँकी भागहरूको मजा लिनुहोस्!
यो मीठो आलु क्यासरोल कुनै विशेष अवसरको लागि एकदम उपयुक्त छ तर यो सजिलो छ - तपाईं यसलाई सबै समय सेवा गर्न चाहानुहुन्छ!
पेकान र मार्समैलोजको थप जोडले वास्तवमै एक क्रन्ची, क्रिस्प टोपिंग जोड्यो कि ती जोडीहरूलाई यति राम्ररी नरम, बटरी मिशिएको मिठो आलुको साथ। एकचोटि तपाईंले यसको प्रयास गर्नुभयो, तपाईं देख्नुहुनेछ कि किन मिठाई आलु क्यासरोल पछि देखिन्छ क्रैनबेरी मिलियनेर सलाद र बेकन ग्रीन बीन बन्डलहरू प्रत्येक विशेष अवसर मा।
अधिक मीठा आलु प्रेम
भुटेको मीठो आलु
मीठो आलु पाई
पकाएको मीठो आलु
मीठो मिठो आलु
तयारी समयबीस मिनेट कुक समय25 मिनेट कुल समयचार मिनेट सर्भिंगहरू१ सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन यो सजिलो स्वीट आलु क्यासरोल पेकान र मार्शमैलोको साथ माथि छ र यो पारिवारिक धन्यवाद टेबुलमा परम्परागत पक्ष हो। यस सान्त्वनाको थालमा कोमलताले मैश गरिएको मिठो आलु, खैरो चिनी र दालचिनीको स with्केतको साथ एकजुट हुन्छ। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢3 पाउन्ड सखरखण्डा खुल्ला र चौकोनी टुक्रामा काट्नुहोस्
▢⅓ कप मक्खन नरम
▢½ चम्मच भनिला एक्स्ट्र्याक्ट
▢¾ कप पेकान काटिएको, विभाजित
▢¼ चम्मच दालचिनी वा स्वाद गर्न
▢दुई कप लघु मार्शमैलोहरू
He 375 डिग्री सेल्सियसको लागि तापो ओभन।9x १ pan प्यान ग्रीस गर्नुहोस्।
उम्लिएको पानीको भाँडामा मीठो आलु राख्नुहोस्। १ minutes मिनेट वा काँटा टेंडर सम्म उमालेर। नाली।
ठूलो भाँडामा (वा भाँडोमा आलुहरू पकाइएको थियो), मिठो आलुलाई खैरो चिनी, नुन, दालचिनी, भेनिला र नुन र कालो मिर्चले म्यास गर्नुहोस्।
आधा प्याकनमा राख्नुहोस् र तयार प्यानमा फैलियो।
मार्शमैलोहरू र बाँकी पेकानहरूसँग छर्कनुहोस्।
२ minutes मिनेट को लागी बेक गर्नुहोस् वा मार्समेलो सुनौलो खैरो र आलुहरू तताइन्छ।
क्यालोरिज:१88,कार्बोहाइड्रेट:२g,प्रोटिन:१g,मोटो:।g,पागलिएको बोसो:दुईg,कोलेस्ट्रॉल:१०मिलीग्राम,सोडियम:। 87मिलीग्राम,पोटासियम:6१6मिलीग्राम,फाइबर:3g,चिनी:१g,भिटामिन ए:१२१55IU,भिटामिन सी:२.१मिलीग्राम,क्यालसियम:36मिलीग्राम,फलाम:०.मिलीग्राम
कीवर्डमीठो आलु क्यासरोल कोर्सअतिरिक्त खाना पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
क्रक पॉट स्टफिंग
बिस्तारै कुकर मसालेको आलु
लसुन भुनी बेकन ब्रसेल्स स्प्राउट्स